Wararka Maanta: Axad, July 1 , 2012-Qarax khasaare geystay oo lala eegtay Kaniisado ku yaalla Magaalada Gaarisa
Qarax khasaare geystay oo lala eegtay Kaniisado ku yaalla Magaalada Gaarisa Axad, July 01, 2012 (HOL) — Wararka aynu ka heleyno magaalada Garisa ayaa sheegaya in goordhow qarax xooggan uu ka dhacay goob kaniisad ah oo ay ku sugnaayeen dadweeyne fara badan, iyadoona la sheegay in qaraxu sababay khasaarooyin lixaad leh.
Ilaa imika ma cada tirada rasmiga ah ee dadka ku waxyeeloobay qaraxa, haseyeeshee waxa lagu soo waramayaa in qaraxa oo la aaminsayahay in uu ahaa nooca Bambaanooyinka gacanta laga tuuro uu ka dhacay gudaha kaniisad ku taal degmada Garisa oo ay ka buuxeen dad fara badan.
"Qaraxa waxa uu ka dhacay gudaha kaniisadda, maantana Axad ayay ahayd oo dad fara badan ayaa ka buuxay Kaniisadda, waxaana goobta soo gaaray gawaari Ambalas ah oo dadkii ku waxyeeloobay Isbitalka u qaadayay," ayuu yiri Ahmed Deekh oo kamid ah dadka ku dhaqan Magaalada Gaarisa.
Ilaa imika ma jiraan masuuliyiin katirsan dowladda Kenya oo faahfaahisay khasaaraha ka dhashay qaraxa, haseyeeshee waxa lagu soo waramayaa in qaraxu sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii ku jiray Kaniisadda.
Wixii warar ah ee kusoo kordha qaraxaasi dib ayaan idinka soo gudbin doonaa Insha'llah.
Axad, July 01, 2012(HOL): Xulka Spain ayaa markii 2aad ku guuleystay koobka qaaradda Yurub kaddib markii uu 4—0 ku dhuftay xulka Italy oo rajo ka qabay in uu koobkan hanto. Munaasabadda 1-da Luulyo oo si weyn looga xusay Magaalda Eskilstuna ee dalka Sweden (SAWIRRO) 7/1/2012 4:16 PM EST
Axad, July 01, 2012(HOL): Xaflad lagu maamuusayay 52 guuradii ka soo wareegatay markii ay Gobollada Koofureed ee Soomaaliya ay xornimada ka qaadeen gumeystihii Talyaaniga, sidoo kale ay midoobeen gobollada Waqooyi iyo Koofur ee Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Eskilstuna ee dalka Sweden. Munaasabad lagu xusayay 1-da Luuliyo oo uu ka qaybgalay Madaxweynaha Somalia oo Muqdisho lagu qabtay (SAWIRRO) 7/1/2012 8:38 AM EST
Axad, July 01, 2012 (HOL) — Ciidmaada dowladda KMG oo kaashanaya kuwa Raaskaambooni iyo Xoogagga Al-shabaab ayaa xalay ku dagaalamay deegaanka Qooqaani oo hoostaga Degmada Afmadow, iyadoona dagaalkaasi uu sababay khasaarooyin kala gaaray labada dhinac. Munaasabado lagu xusayay 1-da Luuliy oo xalay ka dhacay Gobollada Gedo, Bakool, Bay, Hiiraan iyo Shabeellooyinka 7/1/2012 4:00 AM EST